Unyango lwaManzi lweNkunkuma, i-China inkunkuma yaManzi yokuCoca iiMveliso zeBlower, abaXhasi, abaFektri -NANTONG RONGHENG IZIXHOBO ZOKUSINGQONGILEYO., LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Unyango lwaManzi lweNkunkuma
Inkampani iqokelele amava atyebileyo kwishishini lokucoca ilindle. Ababethwa ngothotho lweWT bayaphuhliswa kwaye baphucule iimveliso zelindle besebenzisa izixhobo zempepho yesiqhelo: iindleko eziphezulu zokusebenza, ingxolo yezixhobo ezinkulu, kunye notshintsho olukhulu kwiimeko zokusebenza.
WT series amanzi unyango Roots blower kakuhle, okonga umbane, ephantsi-ingxolo, micro-ukungcangcazela, intsebenzo ezinzileyo, ixesha elide yokusebenza ngaphandle kwenkathazo, iindleko zokugcina eziphantsi; ukuthathela ingqalelo ukulungelwa kolondolozo kuyilo, eligciniwe (iqondo lobushushu, ioyile yeoyile, ukungcangcazela, njl.) Isinxibelelanisi sesenzi sokujonga kude.
Ngenxa yeendleko zeshishini lokucocwa kwelindle ngexesha lokusebenza kwexesha elide, inkampani yethu iphuhlise inkqubo yomoya ochanekileyo weemveliso zothotho lweWT. Olu luhlu lweemveliso lunokuhlengahlengisa ngokuzenzekelayo imeko yokusebenza ngokungafaniyo kweoksijini enyibilikisiweyo kwilindle, kuthintele ukungasebenzi kakuhle, ukunciphisa ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kwamandla, kunye nokugcina iindleko zokusebenza.
Ngokwenqanaba lengxolo kwindawo yokusebenza, ii-WT series blowers zisebenzisa iitekhnoloji ezinelungelo elilodwa lomenzi njenge-CONCH iprofayile ye-contour, i-diamond yokungena kunye ne-outlet, kunye ne-airflow buffer cavity, ethi inciphise ukubetha komoya kunye nokushukuma komatshini wonke. Iimveliso zoluhlu lwe-WT zikwanokuxhotyiswa ngesandi kunye neemveliso zokunciphisa ingxolo, ezinokuthengwa kunye nokuphuculwa ukunciphisa ingxolo ebalekayo yefeni (umatshini).
Ngenxa yokunyuka kwamaqondo obushushu okubangelwe kukunyuka koxinzelelo lwenkqubo ngenxa yokukhutshwa kwendle, ukuvalwa kwetyhubhu ye-membrane, kunye nokwanda kwenqanaba lamanzi ngexesha lonyango lwelindle, i-WT series blower yamkela uyilo oluhlanganisiweyo lomoya-opholileyo kunye namanzi ifumene ipatent yesizwe yelungelo elilodwa lomenzi, enokuthi inyuse uxinzelelo olusebenzayo Emva kokuphakama, itshintshiwe ukusuka kwindawo epholileyo yomoya ukuya kwindawo epholileyo emanzini, enendawo elungileyo yokuziqhelanisa neemeko ezinzima zokusebenza njengokucinezeleka okukhulu kunye nobushushu obungaphezulu; ithintela ukunyuka kweendleko okubangelwe kukususa izixhobo kwiimveliso eziqhelekileyo kwaye inezoqoqosho olungileyo.
● Ukupholisa: umoya opholileyo kunye nopholileyo ngamanzi, unokutshintshwa ngokufanelekileyo;
● Ubume bomzimba: uyilo lwendabuko, ubumbano lwendlu eshinyeneyo
Qaphela: Naziphi na iimeko ezintsonkothileyo zokusebenza ezibandakanya ukusebenza kweendawo eziphakamileyo, ukusebenza kwamaza asezantsi, ukuthuthwa kwegesi exineneyo (helium), njl., Nceda unxibelelane neqela lethu lobuchwephesha kwangaphambili.